Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Oo Ka Murugooday Geerida Jamaica Songbird
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • Music • News • Dalxiiska
Fanaanada reer Jamaica Karen Smith ayaa geeriyootay
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, iyo mas'uuliyiinta kale ee dalxiiska ayaa u baroor diiqaya geerida fannaankii caanka ahaa ee la jeclaa, Karen Smith. Smith, oo muddo tobanaan sano ah ku jilayay heesaha cabaret ee dhammaan meelaha loo dalxiis tago, ayaa goor hore oo maanta ah geeriyooday.
Karen wuxuu noqday magaca qoyska ee dalxiiska iyo Jamaica ballaaran.
Waxay noqotay mid la mid ah madadaalada dalxiiska waxayna u tagtay inay soo bandhigto dhacdooyin badan oo qaybta ah.
Smith waa madaxweynihii hore ee Ururka Jamaica ee Muusikada iyo Ururka Iskaashatooyinka wuxuuna ku helay Amarka Kala -soocidda darajada Sarkaalka.
“Dhammaan waaxda dalxiiska ayaa ka murugaysan geerida Karen Smith kuwaas oo keenay dhimbiil cajiib ah iyo xirfad -yaqaannimo bandhigeedii. Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoyskeeda, asxaabteeda, iyo asxaabteeda, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett. "Karen waxay noqotay magaca qoyska ee dalxiiska iyo Jamaica ballaaran iyada oo leh shaqsiyad xumad leh iyo cod gaar ah," ayuu raaciyay Wasiir Bartlett.
"Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan saaxiib la ahaa Karen, runtii waxay ahayd astaanta nimcada, soo jiidashada iyo hal -abuurka. Heesaheeda ma aha oo kaliya kuwo in badan oo naga mid ah soo jiitay laakiin waxay u abuurtay dareen nasasho dad aad u tiro badan oo ku jira duruufo kala duwan. Waxa kale oo lagu xasuusan doonaa hoggaankii fiicnaa ee ay u fidisay bahda muusiga, ”ayuu yidhi.
Smith waa madaxweynihii hore ee Ururka Jamaica ee Muusikada iyo Ururka Iskaashatooyinka wuxuuna ahaa qaataha Amarka Kala -soocidda darajada Sarkaalka.
“Karen waxay la mid noqotay madadaalada dalxiiska waxaana uu ahaa qof u soo jiitamayay dhacdooyin badan oo qaybta ah. Waad ogayd in marka Karen la ballansado, waxqabadku wuxuu noqon doonaa mid aan kala go 'lahayn oo soo jiidan kara, "ayuu yiri Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White.
Waxaa lagu yaqaanay heeso ay ka mid yihiin “Jannada,” “Waxaan Rabbi Rabay,” iyo “Waan Dhici Karaa,” Smith sidoo kale wuxuu ahaa saddex meelood meel kooxda, Pakage, oo ay ku jireen fannaaniin Gem Myers iyo Patricia Edwards.